Siyaasadda Jar-iska-Xoornimada iyo Siday Somaliland Sigatay (29 Sebtembar, 2009) | Somaliland.Org
Siyaasadda Jar-iska-Xoornimada iyo Siday Somaliland Sigatay (29 Sebtembar, 2009)
September 29, 2009	I. Hordhac
26kii bisha September, 2009, kooxda Aqoonyahanka Madaxa-banaan ee Somaliland ayaa shir isugu timi ay ku falanqeeyeen Saamaynta iyo hirgelinta heshiiskii bulshada caalamku isugu keentay saddexda xisbi qaran ee Somaliland iyo go’aankii taariikhiga ahaa ee Golaha Guurtidu uu cod midaysan ku taageeray.
Shirka waxaa qabtay Machadka Cilmi-baadhista Bulshada iyo Horumarinta (SORADI), Waxaana hagayey Agaasimaha SORADI, Dr. Maxamed Cismaan Fadal. Kooxda Aqoonyahanku (ISG) waa xubno muddo-dheer ka soo qayb-qaatay taxanaha dibu-dhiska iyo dimuqraadiyeynta Somaliland, waana dad karti u leh gorfayn dhab ah xeeladaha lagu furdaamiiyo iyo tabaha lagu abbaari karo arrimaha taagan. Xubnaha kooxda Aqoon-yahanku waxay kala yihiin: Cabdi-Shakuur Sh. Cali-Jawhar (Dhakhtar maskaxda iyo siyaasad gorfeeyha haga warkamaanta.com); Amina Maxamuud Warsame (Agaasimaha Fulinta NAGAAD), Cabdilqaadir X.Ismaaciil Jirde (Gud. Ku-xigeenkii hore ee G. Wakiillada oo hadda safar ku maqan), Shugri X. Ismaciil (xubin Komishankii hore, kana tirsan Golaha dimuqraadiyadda Afrika, ahna Guddoomiyaha hay’adda Candle Light), Ibrahim Jamac Cali- Reyte (Xubin G. Wakiillada, iyo Garyaqaan); Fawsi Aw Yonis (Ururka Qareennada Somaliland); Cabdi Axmed Nuur (Xubin hore ee G. Guurtida, Sarkaal hay’adda FOPAG); Bobe Y. Ducaale (Xidhiidhiyaha Cilmi Baadhista-APD); Haraun X. Axmed Qulumbe (Hay’adda ActionAid); Jacfar M. Gadaweyne (SONSAF); Moxamed Xasan Ibrahim (Cilmi-baadhe-APD); Sucaad Ibrahim Cabdi (Cilmi-baadhe-APD); Wacays Muse (Agaasimaha Fulinta SAMATALIS); Dr. Maxamed Fadal (Agaasimaha SORADI); Muse Cabdi (Dhiinka arrimaha Waxbarashada-Jaamacadda Hargeysa); Yuusuf Kaariye-PhD(Cilmi-baadhe Athropologist ah).
II. Hirgelinta Heshiiska
1. Xaraaraddii oo Degtay
Kooxda Aqoonyahanka Somaliland ee Madaxabannaani waxay Guurtida ku ammaanayaan doorashada jidka wadahadalka, suluxa iyo in meel-dhexe laysugu yimaado oon dhinacna la raacin ama go’aan dhinac u xaglinaya la qaadan. Waxaannu u mahadnaqaynaa dawladaha Itoobiya, Ingiriiska iyo beesha deeqbixiyeyaasha caalamiga ah ee dadaalka u galay sidii la isugu keeni lahaa hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasiga ah si ay heshiis sulux ah isula qaadan lahaayeen. Waxaan kaloo mahadnaq leh dhammaan dadkii muwaadiniinta ahaa ee sida niyadsamidu ku jirto uga qaybqaatay gurmadkii loogu dadaalayey xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee inagu habsadey isla markaana muujiyey dareenkooda ay ku taageersan yihiin Somaliland ee daafaha dunidoo dhan.
Xiisaddii waa la dejiyey iyadoo la gaadhey xaalad “guul-guul” lagu sifayn karo. Balse, hawl culus ayaa weli dhiman in la qabto. Guusha ugu weyn ee la gaadhey ilaa hadda waa niyadsamida iyo iskaashiga la soo nooleeyey ee mucaaridka iyo xisbiga talada haya. Waxaa abuurantay fursad qiimo leh si degdeg ahna u xidhmi karta haddaan si waxku ool ah looga faaiidaysan. Kooxda Aqoonyahanku waxay Guurtida ka codsanayaan inay sii wadaan inay hoggaanka u qabtaan taabbogelinta wixii lagu heshiiyey. Aqoonyahanku waxay aaminsan yihiin in hirgelinta furaha guusha heshiiska caalamiga ahi ku xidhan yahay dhismaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo cusub labada toddobaad ee soo socda.
2. Furaha Hirgelinta Heshiiska: Dhismaha Komishan Cusub
Kadib marka la qabto xafladda saxeexidda heshiiska, Guurtida waxaa looga fadhiyaa isu keenidda daneeyeyaasha muhiimka (3da xisbi siyaasi iyo Golaha Wakiillada) iyagoo la tashanaya bulshada rayidka si looga hawlgalo habraacii lagu kala diri lahaa Komishanka fadhiidka ah loona dhisi lahaa Komishan cusub oo niyad cusub ku bilaaba hawsha. Madaxweynaha, Guurtda iyo labada xisbi ee mucaaradka waa in aanay kaga badan 7 maalmood soo dhammaystirka magacaabista saamigooda xubnaha Komishanka. Taariikhda bartilmaameedkeenna Komishanka cusubi oo diyaar ahi waa 15ka Oktober, 2009.
Waayo Komishan cusub? Komishanka cusubi waa in ay karti u leeyihiin gudashada waajibaadka loo xilsaaray si hufan wax ku oolna ah kagana wakiil yihiin shacabka Somaliland. Ilaa markii la dhisay Komishankan jooga ee 2006, qarankoo dhammi wuxuu ku dadaalayey sidii hawlaha komishanku u fuli lahaayeen loona dabooli lahaa dhaliilahooda: Waxaa laga filayey in ay abaabulaan maareeyaanna doorashooyin xor iyo xalaal ah oo qabsooma; inay abuuraan saaxad dhexdhexaad u ah daneeyeyaasha doorashada oodhan, gaar ahaan 3da murashax ee tartamaya iyo taageerayaashooda; la macaamilka waaxda Fulinta iyagoo ah hay’ad madaxbannaan, xog sugan oo run ahna ka siinaya geeddi socodka doorashada; la shaqaynta saxaafadda iyo daneeyeyaasha kale si loo dhawro xeer anshaxa degsan; la shaqaynta saaxiibbadaeenna caalamiga ah ee deeqaha ina siiya iyo in ay ka dhigaan doorashooyinka wax shacabka Somaliland u han wayn yihiin si ay xuquuqdooda siyaasadeed ee codbixinta u gutaan una arkin wax markasta khilaaf iyo hubaal la’aani ku gadaaman yihiin. Komishanka jiraa way ku fashilmeen hirgelinta waajibaadka kor ku xusan.
Komishanka loo baahan yahay? Komishan, xubnihiisu hufan yihiin, hawlkarnimo ku sifoobey, kalsooni xisbiyada oo dhan ka haysta iyo shakhsiyaad sumcad wanaag bulshada iyo qarankaba ku dhex leh – oon ceebo hore lahayn.
Komishanka cusubi waa loo tixgeliyaa lammaanaha ama in dumar ku jiraan. Hirgelinta sifooyinka kor ku xusan waxay u taal hay’adaha soo xulaya xubnaha Komishanka iyo Baarlamaanka oo ansaxinaya.
III. Xaaladaha ka Dhalan kara Hirgelinta Heshiiska
1. Xaalad guul-guul ah: Komishan cusub oo si dhaqso ah loo abuuro.
Waxa lagu guulaystay in daneeyayaashu iskaashadaan si looga faa’iidaysto fursadda gaaban ee aynu haysan. Muddo aan ka badnayn laba usbuuc, ayaa waxa lagu dhameeyey samaynta Komishan cusub oo buuxinaysa shuruudihii looga baahnaa in ay qabanqaabin karto doorasho xor oo xalaal ah. Islamarkiiba waxay ansixisay shuruudihii shaqo ee lagu soo xuli lahaa Guddida Khubarada ah, taas oo iyan u hawlyaraysay Deeqbixiyeyaasha in ay dhakhso u keenaan Guddidaas.
Waxay Guddidii Khubaradu keeneen intaan bisha Oktoobar, 2009 dhammaan, taladii qorsho wakhtiyeedka doorashada, si ay Komishanku u xaddido maalintay ay dhacayso doorashadu; isla halkaasna ay ka soo baxdo muddada kordhinta wakhtiga xilka Madaxtooyada oo ah bil ka damabaysa.
Deeqbixiyeyaashu waxay keeneen kharashkii iyo farsamadii looga baahnaa in doorashadu qabsoonto. Tartanta hufan bay galeen murashaxiinti; dadkii xaqoodii wax-dorasho ayey heleen, waxaanay doorteen Madaxweyne iyo Ku-xigeen oo la dhaariyey agagaarka bisha Febraayo ee 2010. Dadkii reer Somaliland waxay dhidibada u sii aaseen dimuqraadiyadda waxaanay ku sii dhowaadeen himiladoodii citiraafka.
2-Xaaladda ugu Xun ee iman karta: Waa Dibudhiska Komishanka oo Fashilma ama dhicisooba:
Waxba kama baranno waayo-aragnomadeenii hore ee la xidhiidhay dhismaha Komishanka. Kamaynaan faa’iidaysan fursaddi gaabnayd ee ay daneeyayaashu isu calool furnayeen. Danaha shakhsi ama kooxeed ayaa hadhaynaya iskaashigii xisbiyada iyo habsamidii dib loogu dhisilahaa Komishanka.. Sida inoogu daran waa la malayn karaa.
Dhismaha Komishanka cusub oo fashilma. Iskaashi la’aan iyo aamin darro daneeyeyaasha muhiimka ah oo hadhaysa caqliyaddii iyo horumar loo gudbo. Kooxdii Khubarada ahayd lama ansixin shuruudihii lagu soo xuli lahaa, hawlgalkoodina dib buu u dhacay. Wakhti doorasho dhacayso lama cayimin. Waa wakhti jahawarer badani jiro.
3-Xaaladda dhinacyo badan: Rajooyin iskhilaafsan oo Serverka laga leeyahay:
Haddii wax runta ka fog laga fisho kooxda khubarada inay hawl mucjiso ah qabtaan oo cid kastaa rabitaankooda qancisaa suurtagal ma aha, waxaanay keeni kartaa inuu lumo iskaashigii iyo niyadsamidii looga baahnaa in ka midho-dhalinta arrimihii doorashada dib looga hawl galo. Dhinaca kale marka laga eego, in si muddakarnimo ah loo dhaqmo lana aqbalo wax kasta oo ka soo baxa dadaalka lagu saxayo khaladaadkii la galay, waxay jidka u furaysaa doorashada, waxayna sare u qaadaysaa dareenka shacabka Somaliland iyo kalsoonida ay ku qabaan nidaamkooda dawladeed. Waxaa dhici karta in kooxda khubaradu aanay wax wayn beddelin xagga tirooyinka codbixiyeyaasha, bulse way madaxbannaan yihiin waana u dhexdhexaad sida la isku hayo ama wax loo kala jiidanayo. Ma jiraan wax kale oo inoo furan oon ahayn in aynu aaminno habraacaas. Waxa ugu horreeye ee ay ka markhaati kacaan waa in sidooda loo aqbalo, haddii aynu rabno in aynu horumar samayno. Waxaynu rajayn karnaa in khubaradu ogsoon yihiin waxa ay qiimaynayaan ayna ku kooban tahay arrin farsamo una soo saaraan natiijada si daahfuran oon madow lahayn dhammaan daneeyeyaashuna iyo beesha caalamkuna u wada joogaan. Waxaan ku talinaynnaa in aan warbixino ku meelgaadh ah la soo saarin waxaananu codsanaynaa in daneeyeyaasha muhiimka ahi oggolaadaan in la soo saaro Liistada Codbixiyeyaasha Kama dambaysta ah.
4-Xaalad ayaan darro ah: Kooxda khubarada hawlgalkooda iyo natiijada oo ka raaga sida laga filayo:
Xaaladda noocan ah waxaa ka dhalan kara ayaan darro cawaaqibkeeda leh. Waxaa lumidoonta fursad qaali ah oo la haysto. Dano shakhsi ama kooxeed ayaa hafindoon habraaca doorashada. Waxaa ka sii darraandoonta in aanay jiridoonin hayad qaran oo dadka Somaliland kula xisaabtamaan masuuliyaddaas iyo dhibka ka yimaadda. Qolyihii heshiiskan keenay ee caalamku waa in ay sammeeyaan wax kastoo suurtogal ah si looga digtoonaado xaaladan oo kale in ay timaaddo.
IV. Talooyin iyo haxda Hirgelinta Heshiiska
1. Talooyin Kooban
1. Guurtidu ha sii wadaan in ay hoggaanka u hayaan taxanahaas si loo xaqiijiyo in xafladdii saxeexu qabsoonto sida ugu dhaqso badan intii suurtogal ah iyo in la dhiso Komishan cusub. Dhammaan axsaabta qaranka, iyo Golaha Wakiilladuna xogogaal u noqdaan sida hawshu u socoto heshiiskana loogu dhaqmayo.
2. Dhammaan daneeyeyaashu waa in si firfircoon uga qaybqaataan si hawsha doorashadu hore ugu socoto loogana digtoonaado arrin kasta oo ka hor imanaya iskaashiga iyo niyadsamida la gaadhey iyo rajada fiican ee dadka Somaliland.
3. Daneeyeyaasha muhiimka ahi waa in ay dedejiyaan hawlaha dhaqsana dib ugu dhisaan Komishan cusub una oggolaadaan in kooxda khubaradu hawsha gudo galaan.
4. Beesha caalamku waa in ay daba taagnaadaan hirgelinta heshiiska hubiyaanna in daneeyeyaashu fulinayaan doorarkooda. Beesha caalamka waxaa kaloo laga filayaa in ay dhaqso u soo diyaariyaan khubaradii si ay Komishan cusub ula hawl galaan.
5. Beesha caalamka waxaa laga codsanayaa inay taageero maaliyadeed iyo farsamo ee doorashada.
FQ: Qodobada Heshiisku oo faahaahsanna ka eeg (www.soradi.org)